Shiinaha Warshadda Qodista Qashinka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Bonovo
Qashin qubka Amphibious waxaa sidoo kale loo yaqaanaa qodista qulqulka, taas oo si gaar ah loogu talagalay inay si wax ku ool ah uga shaqeyso wabiyada, harooyinka qulqulka ah, kanaallada iyo dejinta aagagga dhaqan celinta balli. Waxaan leenahay koox xirfadlayaal ah oo naqshadeeya oo qaabab tayo sare leh oo noocyo badan leh ka qoda qotodheer dhammaan noocyada waaweyn ee qodista oo u dhexeysa 5 ilaa 50 tan. Kooxda Bonovo waxay ku siin kartaa xalal mashruuc oo kala duwan oo ay ka mid yihiin bamka qashin qubka, socodka dheer, mashiinka xamuulka, xamuulka qaybta iyo gacmaha gaaritaanka dheer.
Guud ahaan 3D iyo sawir gacmeedyo:
Nidaamka Spud Poles
Mashruuca Spud iyo Haydarooliga wuxuu kuxiran yahay pontoon kuxigeenka xiran, kaas oo lagu rakibay labada dhinac ee qotodheerta. Awoodda Haydarooliga waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo leexinta ama kor-iyo-hoos u dejinta. Dhererkeeda waxaa lagu go'aamiyaa qoto dheer aagga shaqada. Spuds-ka ayaa la sameeyaa markii la shaqeynayo, ka dibna lagu dhex geliyo dhoobada habka farsamada. Isticmaalka spuds waxay si weyn u wanaajin doontaa xasiloonida hawlgalka qalabka ee biyaha.
Sawirada qaabdhismeedka guurka:
Pontoon dib looga ceshan karo waxaa loola jeedaa masaafada si toos ah ayaa loogu hagaajin karaa inta u dhexeysa laba pontoon oo xadad gaar ah leh. Inta lagu jiro shaqada dhismaha, haddii ay dhacdo jawi cidhiidhi ah, pontoons-ka masaafada u dhexeysa waa la yareyn karaa inta lagu jiro shaqada. Iyada oo la adeegsanayo shaqada hagaajinta booska, waxaan kaa caawin karnaa kor u qaadida xasilloonida jiifka iyo hagaajinta waxtarka shaqada ee macaamiisha
3 Silsiladaha Naqshadeynta: Marka silsiladda la isticmaalo muddo ka dib, garoonku wuu sii kordhayaa sababo la xiriira xiridda pin-ka, taas oo ka dhigaysa silsiladda oo dhan inay sii dheeraato oo ay ka dhalato silsilad daadsan ama sibiibix ah marka la socdo. Waxay si daran u saameyn doontaa howlgalka. Qalabka isku dhejinta ayaa hubin kara silsiladda silsiladda iyo ilkaha qalabka wadista oo si habboon ugu hawlan adoo hagaajinaya booska jeexjeexa. Isku dhejinta boolku waa qaabeynta caadiga ah ee pontoonkeena. Isku dhejinta dhululubadu way ka fududdahay adkeynta boolida, taas oo sameyn karta isku dheelitirnaanta dheelitirka iyo hubinta socodka xasilloon oo wax ku ool ah.
Soo-saarista, nidaamka tijaabinta iyo codsiyada
Hawlgalka tijaabada & baaritaanka shaqooyinka badan - socodka dheer & mashiinka qashin qubka
Deegaanka lagu dabaqi karo:
- Nadiifinta dhulka qoyan ee macdanta, dhirta iyo aaga dhismaha Wetland soo celinta iyo dib u dhiska
- Kahortaga iyo xakamaynta fatahaada mashruuca leexinta biyaha Isbadal ku yimaada saline-alkali iyo dhul wax soo saarkoodu hooseeyo Qoto dheeraanta kanaallada, marinka webiga iyo afka webiga Nadiifinta Harooyinka, Xeebaha, balliyada iyo wabiyada
- Qodida godad saliida & gaaska dhigaya iyo rakibidooda
- Waraabinta biyaha
- Dhismaha muuqaalka iyo dayactirka deegaanka dabiiciga ah
Raridda iyo rarida Weelka: Waxaan samaynaynaa qorshe wax ku ool ah oo rar ah si loo badbaadiyo qiimahaaga xamuulka.
Amarkaaga waxaa lagu maarayn doonaa nidaamyadan
Hore: Kabaha Raadinta
Xiga: BONOVO Dhexdhexaad Digger xcavator mashiinka dhaqaajiya Dunida qodista
Qashin qodista amphibious ee kirada
Qodida qotodheer ee iibka ah
qiimaha qodista xeegada
qashin qubka eik amphibious
Dhul qodayo buggy qalalan
Dhul beereed qoyan oo iib ah